ခံစားမှု့သံစဉ်: January 2010
Posted by blackroze at Monday, January 25, 20100comments
Posted by blackroze at Friday, January 22, 20100comments
အရာတွေလေ...ကိုယ်ရဲ့အောင်မြင်မှု့ကျရှုံးမှု့ဆိုတာ...ကိုယ့်ရဲ့ ability ..., skill ... နဲ့ အများကြီးဆိုင်ပါတယ်.....
Posted by blackroze at Wednesday, January 20, 20100comments
အမေရယ်ကျွန်မရယ်ညီမလေးရယ်.....မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့နေ့ပါဘဲ ..ကျွန်မအသက် ၈နှစ်နဲ့ ၁၄ရက်ပြည့်တဲ့နေ့ပါဘဲ...အဖေက၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ....ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းက
အဖေတာဝန်ကျတဲ့ နေရာမှန်သမျှ ဘယ်လောက်ဘဲဝေးဝေး အဖေနဲ့တူတူလိုက်သွားနေကြပါ ..အဖေမဆုံးခင်.............တစ်နှစ်လောက်မှာ ကျွန်မအမေနဲ့အဖေ အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး ကျွန်မတို့တွေအဘွားနဲ့တူတူ ပြန်လာနေပါတယ်...ဒါပေမဲ့အဖေကအမြဲတမ်းလာတွေ့နေကြပါ...
(20.1.2010 3း55 AM )
Posted by blackroze at Tuesday, January 19, 2010 1 comments
များတွေ့သွားတာပါလိမ့် .....အမေကရော...ဘယ်လိုများရင်ခုန်ခဲ့မလဲ ဆိုပြီး ...
ကျွန်မအဖေ ကျွန်မတို့ကိုခွဲထားခဲ့တာ နှစ်20ရှိသွားပြီလေ....
မော်လမြိုင်မှာဘဲဆက်နေဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်မလဲသူလိုမျိုး စကားသံဝဲ၀ဲ နဲ့
Posted by blackroze at Friday, January 15, 2010 1 comments
ကျွန်မအလုပ်ပြန်ချိန်က နောက်ကျပါတယ် ပြီးတော့ မနက်ဖန်ကကျွန်မနားရက်ဆိုတော့
သူငယ်ချင်းနဲ့ ချိန်းပြီးညဈေးသွားမယ်ပေါ့ ... သွားတုန်းကတော့ နှစ်ယောက်ဆိုတော့
ဟိုဆိုင်ဝင်ဒီဆိုင်ဝင်နဲ့ ဈေးပတ်ပြီးလို့အပြန်ကျတော့ သူငယ်ချင်းနဲ့က ပြန်ရမဲ့လမ်းချင်းမတူတော့ဘူး ...
ညဈေးထိပ်က ဘူတာမှာတင်သူက MRT စီးပါတယ်
ကျွန်မကတော့ အိမ်နဲ့လဲသိပ်မဝေးတော့တာနဲ့ လမ်းလျှောက်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ..
လမ်းလျှောက်ပြန်မယ် ဆိုမှဘယ်နှစ်နာရီရှိပြီလဲ ကြည့်မိပါတယ်..
ကျွန်မလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ လမ်းမှာအဘိုးကြီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ပါတယ် ...
အသက်ကတော့ 60 လောက်များရှိမလားဘဲ .....Homeless တစ်ယောက်ပါ ...
အစကတော့ ညပိုင်းလဲဖြစ်တယ် ....ပြီးတော့12 နာရီလဲကျော်နေပြီဆိုတော့
နည်းနည်းတော့ လန့်သွားမိပါတယ် ..
ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်ရတာက တစ်ခုခုကိုကြိုးစားပမ်းစားလုပ်နေတဲ့ ပုံစံပါ ...
ကြောက်စိတ်ထက် သိချင်စိတ်ကများသွားတယ်ဆိုပါတော့ ........
သူဘာများလုပ်နေတာလဲ သိချင်တာနဲ့ အဲဒီအနားကဘဲဖြတ်လျှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် .....
သူရှိနေတဲ့ နေရာနဲ့နီးလာမှ သူဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတာ သေချာတွေ့လိုက်တော့
သူကအိပ်ဖို့နေရာလေးတစ်ခု ကြိုးစားပမ်းစားဖန်တီးနေတာပါ ...
အောက်မှာပလပ်စတစ်အစုတ်အပိုင်းအစလေး ..တစ်ခုကိုခင်းပြီး အဲဒီအပေါ်မှာ
အ၀တ်အဟောင်းလေးတွေခင်းနေတာပါ ...ကျွန်မလေ ..ရင်ထဲမှာနင့်နေအောင်
ခံစားလိုက်ရတယ် ...ရာသီဥတု ဒီလောက်အေးနေတဲ့ အချိန်မှာ
ဒီလိုအ၀တ်စုတ်လေးတွေခင်းလိုက်ယုံနဲ့ဘဲ ....သူနွေးထွေးသွားမှာတဲ့လား ...
သူကတော့ ဘာမှသတိထားမိတဲ့ပုံစံ မရှိပါဘူး ..သူဟာသူဘဲလုပ်နေတာပါ ....
ကျွန်မသူ့အနားရောက်တဲ့အချိန်မှာ သူကသူခင်းထားတဲ့ အခင်းလေးပေါ်မှာ ချမ်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့ ....
ငုတ်တုတ်လေးထိုင်နေတာပါ ..ကျွန်မလေ အဲဒီအချိန်မှာ ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့
ခံစားချက်ကိုဘာနဲ့မှ ဖော်ပြလို့မရဘူးထင်တယ် ...သနားတာ စိတ်မကောင်းတာ .....
ကျွန်မသူ့အတွက်တစ်ခုခု လုပ်ပေးလိုက်ချင်တယ် ...
အနီးဆုံး Mcdonald ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဝင်ပြီး မုန့်ဘဲဝယ်ပေးလိုက်ရင်
ကောင်းမလား......7-11 ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်ဘဲဝင်ပြီး မုန့်နဲ့ ကော်ဖီဘဲဝယ်ပေးလိုက်ရင်
ကောင်းမလား ...အပြေးအလွှားစဉ်းစားမိတယ် ...
နောက်ဆုံးသူလိုအပ်တာလေးတစ်ခုခု လုပ်ပေးခဲ့ချင်တယ် ...
စဉ်းစားမိကာမှ ပိုမောသွားပါတယ် ...အခုအချိန်မှာ သူ့အတွက် အလိုအပ်ဆုံးက
Mcdonald တို့ 7-11 တို့ ကမုန့်တွေ ပစ္စည်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး ...
နွေးထွေးတဲ့ အိပ်ယာလေးတစ်ခုလိုအပ်နေတာပါ ....
သူလိုအပ်နေတဲ့ နွေးထွေးတဲ့ အိပ်ယာလေးတစ်ခုကိုတော့
ကျွန်မ .. ဘယ်လိုမှမဖန်တီးပေးနိုင်ပါဘူး ...
ကျွန်မသာတန်ခိုးရှင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သူလိုအပ်တာကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှာပါ .....
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မကလဲ လူတွေထဲက သာမန်လူသားတစ်ဦးဘဲဆိုတော့ .....
စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ဘဲ သူ့ကိုကျောခိုင်းခဲ့ရပါတယ် ....
.လမ်းတစ်လမ်းလုံးလဲ တိတ်ဆိတ်လို့ ..
ကျွန်မစဉ်းစားမိတယ် ...ဒီလိုအသက်အရွယ်အဘိုးကြီးတစ်ယောက်မှာ သားသမီးမရှိဘူးလား...?
ဆွေမျိုးသားချင်းမရှိဘူးလား .... ? သားသမီးရှိရဲ့သားနဲ့များပစ်ထားတာလား ....
(ပြောလို့မရဘူးလေ ကျွန်မရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံကလဲ မိဘနဲ့သားသမီးဆိုပြီးတော့
မိဘကျေးဇူးတွေဘာတွေ သိတတ်တဲ့လူမျိုးတွေကနည်းတယ်လေ ....).
ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ငယ်ကအရမ်းဆိုးခဲ့ပေခဲ့ လို့များ ဒီလိုအသက်အရွယ်မှာ
ဒုက္ခရောက်နေတာလား ? လားပေါင်းများစွာနဲ့ဘဲ ကျွန်မအိမ်ပြန်ရောက်လာပါတယ် ...
လူကသာအိမ်ရောက်လာပါတယ် ...စိတ်ကတော့အဲဒီနားမှာကျန်ခဲ့သလိုပါဘဲ ....
ဒီလိုမျိုးအေးတဲ့ ညတွေကို သူဘယ်လောက်ရင်ဆိုင်နိုင်မှာလဲ ...
မွေ့ယာမရှိ ခေါင်းအုံးမရှိ စောင်မရှိ နဲ့ လမ်းဘေးမှာကြုံတဲ့နေရာမှာ
ကြုံသလိုအိပ်စက်ရတဲ့ ညတွေ ...သူ့အသက်အရွယ်နဲ့ဘယ်လောက်များ ခံနိုင်ရည်ရှိမှာလဲ .....
အဲဒီHomeless အဘိုးကြီးကတော့ သူ့ဘ၀ကိုဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲ ....
ဘယ်လိုအတွေးတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းနေလဲ ကျွန်မမသိပါဘူး ...
ကျွန်မကတော့ သူ့နေရာမှာသာ ငါ့အဖေသာဖြစ်နေရင် ...ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ထားပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိပါတယ် ....ကျွန်မအခုစာရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ ....အဲဒီhomelessကြီးလဲ သူ့ဟာသူဖန်တီးထားတဲ့ နေရာလေးမှာ အိပ်နေပါလိမ့်မယ် ....
အခုနေခါ ဘုရားကသာ လိုချင်တဲ့ ဆုတစ်ခုတောင်းပါလို့ပြောလာခဲ့ရင် ...
" ကျွန်မဘာဆုတောင်းသင့်သလဲ "
" လူတိုင်းလုံခြုံနွေးထွေးတဲ့ ဘ၀တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ပါစေ...နွေးထွေးတဲ့ အိပ်ယာလေးမှာအိပ်စက်နိုင်ပါစေ..." လို့
(15.1.2010 3:20 AM)
Posted by blackroze at Wednesday, January 13, 20100comments
Posted by blackroze at Tuesday, January 12, 2010 1 comments
သူနှင့်ရွယ်စူး ကိုယ့်ချစ်ဦးဟု ..
( ဒီကဗျာလေးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်မ ၁၀ကျောင်းသူ
ဘ၀ တုန်းကဖတ်ခဲ့ရတဲ့ဝတ္တုတပုဒ် ထဲမှာပါတာပါ..
ဒါပေမဲ့ ကဗျာလေးကိုတော့ စိတ်ထဲမှာခုချိန်တိုင်အောင်
မှတ်မိနေဆဲပါ ..ကျွန်မနှစ်သက်တဲ့ ကဗျာလေးပါဘဲ...)
(12.1.2010 1း40 am )
နွေရာသီ ရောက်လာတာကိုက စောလွန်း…..
(12.1.2010 1:15 am)
Posted by blackroze at Tuesday, January 12, 20100comments
သူ့ နံဘေး၊ ဆောင့်ခဲ့ရသေး
(12.1.2010 12း50 am )
Posted by blackroze at Sunday, January 10, 20100comments
Posted by blackroze at Friday, January 08, 20100comments
ငါ့ဘ၀ရဲ့ angel လေးတစ်ပါးပါ.............
ငါ့ဘ၀ ရဲ့ သံစဉ်လေးတပုဒ်ပါ......
Posted by blackroze at Friday, January 08, 2010 1 comments
''''''' အချစ်ရူး """"' တဲ့လေ.......။။။။။။။။